Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca oo war kasoo saaray weerar ay ku qaadeen ciidamada Xizaamul amniga. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca oo war kasoo saaray weerar ay ku qaadeen ciidamada Xizaamul amniga.
On Aug 3, 2019 419 0
Maalintii shalay oo Jimco ahayd, ciidamada Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca waxay qaadeen weeraro ballaaran oo gallaaftay nolosha askar badan oo katirsan malleeshiyaadka daacadda u ah Imaaraadka ee Xizaamul amniga.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Mujaahidiinta ayaa weeraray saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Xizaamul amniga, kaas oo ku yaala mandiqadda Al-maxfad ee gobolka Abyan, ee koonfurta wadanka Yemen.
War qoraal ah oo ay Ansaaru Shareeca ku baahisay baraha Internetka waxay ku sheegtay in weerarkaas ay ugu suurta gashey iney gebi ahaanba kula wareegto saldhiga, halkaasna ay kusoo furato qanaa’im kala gedisan.
Ugu yaraan labo gaari oo midi uu yahay cabdi bile iyo Mooto ayaa lagu gubay dagaalka, waxaana lagu soo qaatay gaari Cabdi bile ah iyo saanado kale oo kala duwan, iyadoona ciidankii saldhiga joogay goobta lagu gumaaday.
Dhanka ciidamada Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca waxaa warka lagu sheegay inaaney jirin wax gaaray, iyagoo bad qabana ay goobta kasoo insixaabeen.
Ciidamo gurmad u ahaa kuwa lagu weeraray Al-maxfad ayaa iyagana waxaa qaraxyo miino lagula eegtay deegaan lagu magacaabo Muudiyah.
Mid kamid ah gawaaridii ay saarnaayeen malleeshiyaadka ayaaa ku gubtay qaraxa lala helay, waxaana goobta ka dhashey waxyeello isuga jirta dhimasho iyo dhaawac oo gaartay askartii gurmadka ahaa.
Maalmihii lasoo dhaafay, waxay Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca sii kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan Xuuthiyiinta iyo malleeshiyaadka daacadda u ah Imaaraadka ee Xizaamul amniga.
Koonfurta Yaman ayaa masrax u ah howlgallada Jihaadiga ah ee ay fulinayaan faraca Al-Qaacida ee wadanka Yemen oo lagu magacaabo Ansaaru Shareeca, waxaana dagaalkooda oo in muda ah socda uu marba gala marxalad, iyagoo hadda wada dagaallo jabhadeyn ah oo lagu dhiig bixinayo jihooyinka kala duwan ee ku lugta leh duulaanka dalka Yemen.
Axmad 3594 posts 8 comments
Dhageyso Barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada.
Xillibaan katirsan Maamulka Hir Shabeelle Oo Lagu Weeraray Muqdisho.
Maxmuud Ugaas: Maraykanka Wuu ku jabay Dagaalka Afqaanistaan. (Dhagayso)
Axmad	 Jul 31, 2021 0
Maxmuud Ugaas: Maraykanka Wuu ku jabay Dagaalka Afqaanistaan.…
Ciidamada Amaanka ee wadanka Tuunis Oo Xabsiga dhigay Xillibaano…